Even Daw Suu could not becomeaPresident and could not control Home Ministry, Military, Police, Htway Oaks asareal Government leader. And she is the only head of the government in the world without getting security guards | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeEven Daw Suu could not becomeaPresident and could not control Home Ministry, Military, Police, Htway Oaks asareal Government leader. And she is the only head of the government in the world without getting security guards
ရိုဟင်ဂျာက အငြင်းပွားနေလို့ ခန ထည့် မပြောနဲ့ဦး…..
ပန်းသေးလူမျိုးတွေ…….
ပသျှူးလူမျိုးတွေ……..
ကမန်လူမျိုးတွေ……………….ဘာအခွင့် အရေးတွေများရနေကြလို့လဲ…
ချင်းလူမျိုးတွေ……
ကချင်လူမျိုးတွေ……ဘာတိုင်းရင်သားအခွင့်အရေးတွေများရနေသလဲ..
ခရစ်စယန်တွေ ဖြစ်နေလို့ပါဆိုပြီးဖြေဦးမှာ မဟုတ်လား…..
ရခိုင်လူမျိုး…….
ရှမ်းလူမျိုး…….
ကရင်လူမျိုး……..
ကယားလူမျိုး…….
မွန်လူမျိုး……….ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်…….တိုင်းရင်းသားတွေ…..
ဘာ ….တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေများ ရနေလို့လဲ…..
အုပ်ချု ပ်သူ တွေနဲ့ လူမျိုးရော ကိုးကွယ်ရာပါ တထပ်ထဲတူညီတဲ့…..
ဗမာလူမျိုးတွေထဲမှာတောင်……..
နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး မရတဲ့သူတွေ အများကြီး…..
← 21st. Century Myanmar-Narzi Concentration Camps ၂၁ ရာစု ခေတ်၊ မြန်မာပြည်မှ နာဇီ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းရေး စခန်းများ
“အမျိုးသားရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေး”ထဲမှာ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပါဝင်နေသလဲဆိုတာ စူးစမ်း ကြည့်လိုက်တော့ “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ”ပါတယ်၊ “သီပေါမင်းအုတ်ဂူကို သွားကန်တော့” တာပါတယ်။ သီတဂူဆရာတော်ရဲ့ “၄ ချောင်း ထောက်ဒေသနာ” ပါတယ်။ သင်္ကန်းဝတ် ဝီရသူရဲ့ “တိတ်ပိတ်တရား” ပါတယ်။ “အောင်ဝင်းဇော်၊ အောင်ဝင်းခိုင်၊ ဇေယျာဖြိုး” တို့လို (DSA) ကျောင်းဆင်းဟောင်း စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေရဲ့“အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု”ပါတယ်။ “ကောလဟလမျိုးစုံ” ဖန်တီးထုတ်လွှင့် နေမှုတွေဟာ ဇာတ်တိုက်ထားသလို၊ အကွက်ချစီစဉ်ထားသလို အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ →